Akụkọ - Nlezianya maka ụlọ ọrụ Gearmotors na ndị na-ebubata ya
Ọnọdụ okpomọkụ maka iji:
Ekwesịrị iji igwe eji arụ ọrụ arụ ọrụ na okpomọkụ nke -10 ~ 60 ℃. Ọnụ ọgụgụ ndị e depụtara na nkọwapụta katalọgụ na-adabere n'iji ya eme ihe na ọnụ ụlọ nkịtị dịka 20 ~ 25 ℃.
Ọnọdụ okpomọkụ maka nchekwa:
Ekwesịrị ịchekwa igwe na-acha ọkụ ọkụ na okpomọkụ nke -15 ~ 65 In .Ọ bụrụ na nchekwa dị n'èzí a, griiz na mpaghara isi gia agaghị enwe ike ịrụ ọrụ ọfụma na moto ahụ agaghị enwe ike ịmalite.
La ikwu iru mmiri nso:
Ekwesịrị iji igwe eji arụ ọrụ na 20 ~ 85% iru mmiri arụ ọrụ.Mgbe iru mmiri, akụkụ ọla ahụ nwere ike ịta nchara, na-ebute nsogbu. Ya mere, biko kpachara anya maka iji ya mee ihe.
Na-atụgharị site na ọdụ mmepụta:
Agbanyela igwe elekere site na npụta ya mgbe, dịka ọmụmaatụ, ịhazi ọnọdụ ya iji wụnye ya. Isi gia ga-abụ usoro na-abawanye ngwa ngwa, nke ga-enwe mmetụta na-emerụ ahụ, na-emebi ngwa ngwa na akụkụ ndị ọzọ dị n'ime; na moto ahụ ga-agbanwe ghọọ igwe eletrik.
● Ọnọdụ arụnyere:
Maka ọnọdụ anyị arụnyere, anyị ga-akwado ọnọdụ dị larịị ọnọdụ iji mee nnyocha nyocha nke ụlọ ọrụ anyị. Biko kpachara anya.
● Ntinye nke akụrụngwa akụrụngwa na ntanetị:
Biko kpachara anya maka itinye nrapado .Ọ dị mkpa iji kpachara anya na nrapado ahụ agbasaghị n'akụkụ osisi ahụ wee banye n'ime agba, wdg. ime moto. Na mgbakwunye, zere ịkwado pịa, n'ihi na ọ nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ mebie usoro nke moto ahụ.
Ijikwa ọdụ moto:
Biko kụziere ịgbado ọkụ ọrụ n'oge dị mkpirikpi .. (Nkwanye: Site na ntinye mgbatị na okpomọkụ nke 340 ~ 400 ℃, n'ime sekọnd 2.)
Itinyekwu ọkụ karịa ka ọ dị mkpa maka ọnụ ya nwere ike gbazee akụkụ moto ahụ ma ọ bụ mebie usoro ya. Ọzọkwa, itinye ike gabiga ókè n’ebe ahụ nwere ike itinye nrụgide n’ime ime ụgbọala ahụ ma mebie ya.
Storage Nchekwa ogologo oge:
Echekwala igwe elekere anya na gburugburu ebe enwere ihe nwere ike iwepụta gas na-emebi emebi, gas na-egbu egbu, wdg, ma ọ bụ ebe ọnọdụ okpomọkụ dị oke elu ma ọ bụ dị ala ma ọ bụ nwee oke iru mmiri. Biko kpachara anya maka nchekwa maka ogologo oge dịka afọ 2 ma ọ bụ karịa.
Ọdịdị dị ogologo, ọnọdụ ọrụ, gburugburu ojiji, wdg emetụta ogologo oge nke igwe eji arụ ọrụ, wdg.Ya mere, ọ dị mkpa ịlele ọnọdụ a ga-eji ngwaahịa ahụ n'ezie.
Ọnọdụ ndị na-esonụ ga-enwe mmetụta na-adịghị mma na ogologo ndụ. Biko gwa anyị.
Operation Ogologo oge na-aga n'ihu ọrụ
A-turningghaghaara iji ntụgharị nke mmepụta mmepụta
Mgbanwe nke oge chere ihu
Jiri ya gafee ibu nha
Iji voltage nke a na-anaghị ahụkarị ama ama banyere ọkụ eletrik egosipụtara
A-se A usu mbanye, eg, a obere ezumike, counter electromotive ike, PWM Control
● Jiri nke ọrụ karịrị ikike ma ọ bụ kwere ka a gafee ibu.
● Jiri n'èzí ọgwụ edepụtara ma ọ bụ oke iru mmiri, ma ọ bụ na mpaghara pụrụ iche